"1 Ary mbola nandroso niteny ihany Eliho ka nanao hoe: 2 Mahareta kely amiko, dia hambarako aminao, fa mbola misy teny holazaina hanamarina an’Andriamanitra. 3 Halaiko avy lavitra ny fahalalako, ka hanamarina ny Mpanao ahy aho. 4 Fa tsy lainga tsy akory ny teniko; Lehilahy tanteraka amin’ny fahalalana no eto aminao. 5 Indro, lehibe Andriamanitra, kanefa tsy mba mamingavinga, lehibe amin’ny herin’ny fahalalana Izy. 6 Tsy mitsimbina ny ain’ny ratsy fanahy Izy, fa manome rariny ho an’ny ory. 7 Tsy mampiala ny masony amin’ny marina Izy; Eo amin’ny mpanjaka ambonin’ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay, ka dia tafasandratra. 8 Ary raha voafatotra amin’ny gadra izy sy voafehy amin’ny tadin’ny fahoriana. 9 Dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany, fa efa nanandra-tena izy ireny. 10 Dia manokatra ny sofiny hihaino fananarana Izy ka mandidy azy hibebaka hiala amin’ny ratsy. 11 Raha mihaino ka manaiky Azy Izy, dia lany amin’ny fiadanana ny androny, ary ny taonany amin’ny fahafinaretana 12 Fa raha tsy mihaino kosa izy, dia ho voan’ny fiadiana ka ho faty tsy amim-pahalalana. 13 Fa ny mpihatsaravelatsihy dia mirakitra fahatezerana; Tsy mitaraina izy, na dia afatony aza; 14 Ka dia maty raha mbola tanora izy, eny, afaka ny ainy eo amin’ny olom-betaveta, 15 Fa ny fahorian’ny ory kosa no entin’Andriamanitra mamonjy azy, Ary ny manjo azy no entiny manokatra ny sofiny. 16 Ary na dia hianao aza dia ampialainy amin’ny fahaterena ho amin’ny malalaka izay tsy misy mahatery; Ary ny matavy indrindra no aroso ho eo ambonin’ny latabatrao. 17 Nefa raha fatra-pikikitra amin’ny adin’ny ratsy fanahy hianao, dia hihazona anao ny ady sy ny fanamelohana; 18 Aoka tsy hamporisika anao hiteny ratsy ny fahatezerana, ary aoka tsy hampivily hevitra anao ny halehiben’ny avotra. 19 Moa hahatonga anao ho ao amin’izay tsy misy fahoriana va ny fitarainanao na izay rehetra tratry ny fahatanjahana? 20 Aza irinao ny hihavian’ny alina, izay ampialana ny olona amin’ny fitoerany. 21 Tandremo, aza mivily ho amin’ny ratsy; Fa saingy ozoim-pahoriana hianao, dia mifidy izany. 22 Indro, Andriamanitra miasa amin’ny heriny mampiseho ny fisandratany; Iza no mba mpampianatra tahaka Azy? 23 Iza no efa nandidy Azy ny amin’izay làlan-kalehany? Ary iza no efa nilaza taminy hoe: Efa nanao ratsy Hianao? 24 Tsarovy ny hankalaza ny asany, Izay efa nataon’ ny olona an-kira. 25 Fa faly mahita izany ny olona rehetra; Ary jeren’ny zanak’olombelona eny lavitra eny izany. 26 Indro, lehibe Andriamanitra, ka tsy takatry ny saintsika Izy; Ary tsy hita isa ny taonany. 27 Fa mampisavoana ny rano Izy, dia milatsaka ho ranonorana aman-javona izany, 28 Izay aidin’ny rahona ka alatsany amin’ny olona maro be. 29 Ary koa, iza moa no mahalala ny amin’ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao an-dainy? 30 Indro, mamelatra ny fahazavany eo amboniny Izy ary manao ny fanambanin’ny ranomasina ho firakofany. 31 Fa ireny zavatra ireny no itsarany ny firenena sady anomezany hanina betsaka. 32 Mifono fahazavana ny tànany, ary baikoiny iny mba hahavoa ny fahavalony; 33 Ny fikotrokotrony dia manambara Azy, ary ny omby aman’ondry koa aza milaza ny hihaviany." Joba 36:1-33
Manohy mandray fitenenana i Eliho. Toa misy fieboeboana izany ny fitarihan-teniny. Mba hitaomana ny olona hihaino azy ve ny nahatonga azy hiteny toy izao sa…. ?
Diso ianao. Nantenaina hilaza zava-baovao ingahy rainy ity nefa dia ny teo ihany indray no mbola averiny (17). Filazàna ny amin’Andriamanitra no tanisainy raha jerena saingy mbola miampanga an’i Joba ihany no tena heviny raha dinihina. Ny olona izay faizin’Andriamanitra ka manaiky hihaino ny fananarany ary mibebaka dia mahazo famindrampo, fa raha mihirim-belona tsy miaiky ny fahadisoany kosa dia fahafatesana ny vokany. Teolojia mitombina tokoa izany hamafisin’ny andini-tSoratra masina hafa toy ny hoe: “Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy izany no hahazo famindrampo” Ohabolana 28:13.
Mananatra. Betsaka tokoa ny teniteny foana navoakan’i Joba ary ireny no ananaran’i Eliho azy (18-21): aleoko tsy nisy, aleoko maty sns… Mi “délire” tokoa ary ve i Joba fa mafy loatra ny fahoriany? Misy tokoa ny olona izay mandalo fahoriana mafy dia mifidy ny handevina ny adin-tsainy ao amin’ny alikaola sy ny zava-mahadomelina (21).
Lehibe Andriamanitra. Ny zava-boary (26-31) no maneho izany fahalehibiazan’Andriamanitra tanisain’i Eliho izany. Mahavariana koa anefa fa dia ny fandinihana ny zava-boary no mahatonga ireo milaza azy ho manam-pahaizana sasany tsy hanaiky na hino ny fisian’Andriamanitra ihany koa. Raha mihevitra fotsiny ny amintsika olombelona koa aza anie ka mampiaiky volana e! Ny tànana afa-mandray, ny tongotra afa-mamindra, ny saina mibaiko ireo, ny maso afaka mahita, ny sofina afaka mandre… Samy maneho ny fahalehibiazan’Andriamanitra avokoa ireo.